तपाईको अनिद्रालाई के सहयोग पुर्‍याउन सक्छ? - मन जिउँदो - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
यदि तपाइँ विश्वव्यापी रूपमा लाखौं मानिसबाट पीडित हुनुहुन्छ अनिद्रा, तपाइँ सम्भवतः राम्ररी जान्नुहुन्छ कि यो तपाइँको स्वास्थ्यको लागि कत्ति विनाशकारी हुन सक्छ। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ केहि छैन जुन तपाईंको निन्द्रा गडबडीको लागि एक उपचार हुन ग्यारेन्टी गरिएको छ। भाग्यवस, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं निदाउनमा कठिनाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्न सक्ने उत्तम चीजहरू मध्ये एक यस उपकरणलाई प्रयोग गरेर नै हो प्रसन्नता प्रो तपाईलाई मद्दत गर्न केवल निदाउन सजिलो मात्र होइन तपाईको निन्द्रामा पूरै सुधार गर्नुहोस्। तल, हामी किन जानेछौं ताकि तपाईले यस प्रकारको उपकरण प्रयोग गरेर महान नतीजाहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
कारणहरु प्रसन्नता प्रो अनिद्राको लागि:
१. तपाईंको मस्तिष्कको कार्यहरू परिवर्तन गर्दछ
यस प्रकारको उपकरणले के गर्दछ तपाईंको दिमागले कार्य गर्ने तरीकालाई प्रभावकारी रूपमा परिवर्तन गर्दछ। यसले समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टामा समस्याको समाधानको लागि समाधान गर्दछ। यसले विद्युतीय आवेग पठाउँदै र तपाईंको दिमागमा छालहरूको व्यवहार परिवर्तन गरेर यो गर्न सक्षम छ। जो कोही पीडित छ अनिद्रा बीटा तरंगहरूबाट नकरात्मक असर हुने छ। त्यसकारण, यस उपकरणले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न को लागी समस्याको मूल कारण समाधान गर्न को लागी लक्षणहरु लाई सम्बोधन गर्नुभन्दा।
२ प्रकाश र ध्वनी
यस उपकरणले दुबै प्रकाश र ध्वनी उपचारको लाभ प्रदान गर्दछ तपाईको प्राकृतिक र औषधि रहित समाधान प्रदान गर्नका लागि अनिद्रा। तपाईं यसको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको दिमागले रातमा कुराकानी गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। दुबै प्रकाश र ध्वनी डोपामाइनबाट सेरोटोनिनमा सबै चीजको विमोचन गर्न बाध्य छन्। दिमाग थाहा हुन्छ कि कहिले जाग्ने र कहिले बन्द गर्ने। उपकरणको यस प्रकारको साथ यी तत्वहरू सक्रिय गरेर, तपाईं समस्याहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको दिमागमा सहि प्रतिक्रिया दिनको लागि अग्रणी छन्।
यो उपकरण मात्र मुद्दा को मूल कारण लक्षित गर्न को लागी जाँदै छ, तर यो तपाईं आफैलाई एक मानसिक अवस्था मा तपाइँलाई पुर्ण तनावमुक्त छन् जहाँ आफैलाई राख्न मद्दत गर्न गइरहेको छ। यसैले, यसले तपाइँलाई यस्तो राज्यमा राख्दछ कि निदाउनको लागि अनुकूल छ। तपाईले यस उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको रिलक्समेन्ट अधिकतम बनाउन र मद्दत गर्नको लागि तपाईको सेल फोन जस्ता व्याकुलताबाट। यसले तपाइँलाई प्राकृतिक आरामको राम्रो मात्रा ल्याउन मद्दत गर्दछ जसले आफैलाई निदाउनको लागि सजिलो बनाउँदछ।
समग्रमा, त्यहाँ यस चीजले धेरै चीज गर्न सक्दछ कि जो निदाउन नसक्ने अवस्थामा मुद्दाहरूको अनुभव गरिरहेको छ। यो उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईले आफ्नो शरीर र दिमागलाई धेरै आराम पाएको राज्यमा राख्न सक्षम हुनुहुनेछ र यसले तपाईंलाई मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन तपाईंको नेतृत्व गर्दछ। अनिद्रा। यो तपाइँको लक्षित गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो अनिद्रा स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि औषधि वा रसायन लिन बिना।